Apple Arcade Premieres "Mutambo Wechigaro: Chirevo cheGunguo" | Ndinobva mac
Apple Arcade premieres "Mutambo Wechigaro: Chirevo cheGunguo"
Toni Cortes | | Mitambo
Kana iwe uri fan of akateedzana Mutambo waMatombo, une rombo rakanaka. Apple ichangotanga mutambo mutsva zvichibva pane mavara kubva kune inozivikanwa HBO nhepfenyuro pane yayo Apple Arcade yemitambo chikuva.
Chiitiko chakajeka munguva chaiyo kwaunoda Ishe Mutungamiriri uye iwe uchatungamira mauto eNight's Watch kudzivirira Iyo Wall. Saka kana iwe uri mudziviriri akasimba waJohn Snow, uye iwe uri kunyorera kuApple Arcade, iwe uri kutotora ...
«Mutambo weZigaro: Tale yeMagungu»Icho chitsva juego iyo yakaburitswa papuratifomu yemitambo yaApple, Apple Arcade. Mutambo wehondo unobva pane zvakasikwa zveGeorge RR Martin's Game of Thrones novels.
Zviitiko zvemutambo zvinomhanya mukati nguva chaiyo, zvinoreva kuti kunyangwe iwe usiri kutamba, zvinhu zvichiri kuitika mukati memutambo.
Aya ndiwo marondedzero anoita mugadziri uyu mutambo uyu:
Mumumvuri weRusvingo, tanga wachi yako. Makore zviuru zvisere John Snow asati atora Castle Nhema, iyo Night's Watch yakaumbwa kuti ichengetedze Wall uye kudzivirira muganho weWesteros kunjodzi dzekuchamhembe, nezvose zviri mberi. Mumasango aya emusango, hama dzeNight's Watch nevamwe vavo vakasangana nenjodzi dzaigona kutyisidzira humambo. Asi Rusvingo ibanga rinocheka nzira mbiri.
Vatambi vachapihwa basa rekutumira mafambiro emauto kuNorth, kupfuura iyo Nhare nhema. Idzo nzendo dzinoenderera dzichiongorora kwese kwadzinotumirwa, kunyangwe iwe ukamira uchinyatso kutamba.
Makunguwo anotumirwa achabhururukawo munguva chaiyo, uye newe uchadaro anozivisa nezvako mishumo pavanosvika. Vatambi vanogona kusarudza kutora matanho kana zviziviso zvakadaro zvasvika, kana kungomirira kusvikira vaine nguva yekupinda zvakare mumutambo.
"Game of Thrones: A Tale of Crows" yave kuwanikwa pa Apple Arcade, zveMac, iPad uye iPhone. Mutambo uyu ndewemahara, hapana kushambadza, uye hapana zvekutenga-mukati meapp, sezvazviri tsika mune ese Apple Arcade mitambo.
Ehezve, kuti uwane kurodha pasi kwayo unofanirwa kunyoreswa Apple Arcade, pamutengo we 4,99 Euros mwedzi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Mitambo » Apple Arcade premieres "Mutambo Wechigaro: Chirevo cheGunguo"
Apple iri kutotumira rubatsiro kuBeirut mukumuka kwekuputika kwakakomba pachiteshi
Apple Kuonekwa kwekudonha kunogona kutumira ruzivo rwekurapa futi